Ịzụta Online dị iche iche na ikikere
> Store> License Ọmụmụ
Na-ewu ewu Links
iPhone / iPad Ngwaọrụ
Olu License Enquiry
Ga-esi mara nke ikike suut gị mma.
-Uru nke agụmakwụkwọ ịnye ọnụahịa.
Mụtakwuo banyere nkwụghachi iwu.
Jụọ a ajụjụ ma ọ bụ na-eziga anyị gị nzaghachi site na online ụdị.
Echichi nke usoro ihe omume zụrụ n'okpuru a Single-User Personal License bụ nanị otu otu onye kọmputa ekesịpde ma ọ bụ n'okpuru akara nke licensee gbakwunyere otu ọzọ kọmputa nwekwara ekesịpde site na licensee, eg: Otu kọmputa n'ụlọ na ọzọ na-arụ ọrụ, ma ọ bụ a desktọọpụ n'ụlọ na a laptọọpụ n'ụlọ. Otú ọ dị, mgbe ọ bụla e nyere n'oge naanị otu oyiri nke zụrụ omume nwere ike ịbụ na ojiji.
N'ihi na Personal Iji:
Na Personal License, i nwere ike iji software na a azụmahịa, agụmakwụkwọ, ma ọ bụ ọchịchị gburugburu ebe obibi na i nwere ike na bu n'obi na-eji ya maka onwe ma ọ bụ ọrụ iji na on kpọmkwem otu kọmputa kwa ikike. Na ị na-egbochi si ere ya ere, na-ekesa ma ọ bụ na-ewere ụzọ ndị ọzọ iji n'ịwa revenue kpọmkwem na mmepụta nke software.
N'ihi na Ọmụmụ Iji:
Na Ọmụmụ License, xxx (website) awade ego ka a na-amụrụ ma ọ bụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ na-abụghị uru na gọọmenti na-agba ọsọ oru. Dị iche iche ikikere nhọrọ dị maka agụmakwụkwọ, nnyocha, instructional, na nhazi ojiji. Commercial amachibidoro.
N'ihi na Commercial Iji:
Na Commercial License, a eke mmadụ nwere ike iji software na a azụmahịa, agụmakwụkwọ, ma ọ bụ ọchịchị gburugburu ebe obibi. Azụmahịa Ikikere ọrụ ndị free si mgbochi nke na-eji na mmepụta nke software maka azụmaahịa, dị ka ire, ekesa nakwa ụzọ ndị ọzọ n'ịwa revenue kpọmkwem na mmepụta nke software.
The ikike kwe gị ka ị wụnye ihe omume na kpọmkwem nọmba nke PC kpamkpam n'ime gị na ezinụlọ gị, òtù na Corporation n'ime otu akpan akpan kpọmkwem ọnọdụ (eg ụlọ ọrụ). Nwere ike ị gaghị na-enye, nyefee ma ọ bụ na-ere multi-ọrụ na onye-ikikere mbipụta nke anyị ngwaahịa, ma ọ bụ na-agụnye ndị dị otú ahụ mbipụta na, ma ọ bụ na na ngwaahịa ị na-ere ma ọ bụ nyefee ọ bụla ọzọ ọrụ nwere ike ịnweta software ọ bụla n'ụzọ na-adaba adaba; ka ihe atụ, site na ịnweta mbipụta echekwara na Obodo ike disks ma ọ bụ mbipụta echekwara na netwọk sava.
Enterprise License bụ ụdị software nkwekọrịta na-enye onye zụrụ ikike iji software na a netwọk na otu saịtị, na-akparaghị ókè ọtụtụ ọgwụgwụ ọrụ. Na-emekarị nke a na ụdị ikike-enye gị ohere idetuo na-eji software na otutu kọmputa na otu saịtị ma ọ bụ oké ọnụ karịa ịzụta otu akwụkwọ ma obere oké ọnụ karịa ịzụta a oyiri maka onye ọ bụla na kọmputa na saịtị. E nwere ike ịbụ a kacha kpọmkwem ọtụtụ imekotaotuugbo ọgwụgwụ ọrụ.